‘हटस्पट’ पर्साका सरकारी कार्यालयमा भीड, खाेइ सतर्कता? – Health Post Nepal
‘हटस्पट’ पर्साका सरकारी कार्यालयमा भीड, खाेइ सतर्कता?
२०७७ असार ५ गते १२:०६
काेराेना संक्रमणका लागि हटस्पट जिल्लामा रहेकाे पर्सका सरकारी कार्यालयहरूमा खासै सावधानी अपनाएको देखिँदैन। सरकारले सरकारी कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्न थालेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार सामाजिक दूरी कायम राखेर आलोपालो प्रणालीमा काम सुरु गर्नुपर्ने हो। तर पर्सामा त्यो नियम पालना हुन सकेको छैन।
मालपोत, नापी शाखा, यातायात, भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र विद्युत प्राधिकरण जस्ता कार्यालयहरूमा धेरै भीड हुन्छ। पर्साको यो कार्यालयमा भाइरसको सावधानीबारे खासै सतर्कता अपनाएको देखिँदैन। पहिलाजस्तै अहिले पनि भीड लाग्न थालेको छ।
कोरोनाको महामारीमा सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्नुको साटो अहिले पहिला जस्तै लाइन बसेर सेवाग्राहीले आफ्नो कम गराउँदै छन्।
वीरगन्जमा रहेका यी सरकारी कार्यालयको गेटमा न हात धुने वातावरण मिलाइएको छ न त सेनेटाइजर व्यवस्था छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले टोकन प्रणालीबाट आफ्नो सेवाप्रवाह गरिरहेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। जिल्ला प्रशासनबाहेक अन्य कार्यालयमा जस्ताको तस्तै अवस्थामा सेवा प्रवाह हुँदैछ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिल्ला प्रशासनले कोटा सिस्टममा जाने निर्णय गरेको छ। कोटाअनुसार पहिला आउने वा सम्पर्क गर्ने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा टोकन नम्बर दिइने र सेवा लिन आउने समयसमेत निर्धारण गरी जानकारी गराइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी गराए।
पर्सा कोरोना संक्रमित धेरै भएको जिल्ला हो। संक्रमणको उच्च जोखिमै रहेकाले सेवा प्रवाहका क्रममा भीडभाड नहोस् भनेर कोटा सिस्टम लगाइएको सहायक प्रजिअ बस्नेतले बताए।
दैनिक नयाँ नागरिकता २०, नागरिकता प्रतिलिपि १० र राहदानीसम्बन्धी १५ वटा कोटा निर्धारण गरिएको छ। सेवा प्राप्त गर्न भीडभाड नहुने गरी बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुने हेल्प डेस्कमा राखिएको छ।
कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन र त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन अति आवश्यकबाहेक कमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
हरेक सेवाग्राही कर्मचारीसमेतले मास्क लगाएको हुनुपर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्नुपूर्व थर्मल गनमार्फत तापक्रम जाँच गराउनुपर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्नु पूर्व परिसरबाहिर व्यवस्था गरिएको ठाउँमा साबुनपानीले हात धुनुपर्ने, कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, टोकन नम्बर उपलब्ध गराउँदा निर्धारण गरिएको समयमा अनिवार्य आउनुपर्ने भनिएको सहायक प्रजिअ बस्नेतले बताए।
यो नियम मात्र जिल्ला प्रशासनमा लागू भएको छ। अरु कार्यालयमा केही सावधानी अपनाएको छैन। तसर्थ कोरोनाको सावधानी सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले कोरोना महामारीमा सर्तकता अपनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संक्रमणबाट आफू पनि बच्नुपर्छ र अरुलाई बचाउनुपर्छ उद्देश्यले सर्वसाधारणलाई सगज गराउँदै जानुपर्छ। वीरगन्ज सहरको सडकमा पनि सवारी चाप बढेको छ भने बजारमा सबै पसल खुलेका छन्। देशको प्रमुख नाका वीरगन्ज भन्सार भएकाले गाडीको चहलपहल बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन आए पनि वीरगन्जका बैंकमा नगद कारोबार गर्नेको भीड बढेको छ। गाउँगाउँबाट पेन्सन लिन बैंकमा वृद्धवृद्धाको बाक्लो उपस्थिति छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने सावधानी अपनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।